nbanye na ntanetị
Eleghi anya ị ga-ele anya na nzuzo gị dị na nzuzo dịka ị gwabeghị onye ọ bụla ozi gbasara gị mgbe ị na-egwu na weebụ. Okwuntughe kwesiri inwe uzo 10000th. Ị nwere ike iji ọrụ VPN iji nweta nke ahụ.
Na ọtụtụ ijeri ndị ọrụ n'ụwa nile, ọ dị oké mkpa inwe usoro zuru ezu nke nwere ike ijikọ ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche n'ụwa nile. Ị ga - enweta ezigbo ụlọ ọrụ na ekwentị. Blockchains, nkà na ụzụ dị n'okpuru ebe a na-akpọ Bitcoin, aghọworị isiokwu nke nnukwu hype.
Ọ dị oké mkpa iji rịba ama na ị ga-edozi HostName maka ihe nkesa ọhụụ ọ bụla iji zute aha ọhụrụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere igodo SSH ugbu a, ị nwere ike iji otu ihe ahụ. Ị dịla njikere ugbu a ịṅụrị ọṅụ na nhazi ọhụrụ gị!
O doro anya na ọ ga-ekwe omume dochie 12345 na nọmba ọ bụla n'ọdụ ụgbọ mmiri nke onye na-ahụ maka ihe ntanetịbeghị n'ọrụ. Mgbe ahụ i nwere ike ịmalite ikpe ahụ. Netwọk X Core na-ahọrọ ọnụ iji kenye ohere, dabere na setịpụ nke mgbanwe.
Ọzọkwa, ọ naghị anabata akwụkwọ akaebe nke aka. Mgbe i mechara nke a, anyị nwere ike inweta ọrụ a! Ọ dabara na, ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-agba ọsọ nke RBL ha nyere gị ohere ịnye arịrịọ maka ịnata iwepụ site na ndepụta dị n'okpuru ọnọdụ ị ga-agbaso iwu ha.
Ịmepụta ụyọkọ nanị na-akọwa otu ìgwè kọmputa nke ịchọrọ iji ozugbo ị na-arụ ọrụ na ihe eji eme ihe. Ịmara na nkà na ụzụ bụ nzọụkwụ mbụ iji nọrọ n'ọnọdụ iji nye ndụmọdụ gbasara iwu gbasara mmechi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ileba anya ngwa ngwa gị, ị nwere ike iji Surge.
Nọmba m bụ 1 si na nọmba ọnụ ọgụgụ dị na mpaghara mpaghara. Jiri mpaghara menu dochie iji kpebie nhọrọ a ma ọ bụrụ na a họrọbeghị ya. Igwe dị n'okpuru a bụ akụkụ nke IAM peeji nke ma ọ bụrụ na ị pịa ihe ọ bụla, ọ ga-akọwa ọrụ ndị achọrọ iji rụchaa ihe ndị a chọrọ.
Rịba ama otú akpa ndekọ m ugbu a gosipụtara na ihe ndekọ ederede ndị ọzọ na ngalaba nke mbụ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ikikere ọha na eze na-ebipụta, ma, o nweghị ike ịme ndị mmadụ. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịnweta plethora nke ọdịnaya nke nwere ike ịmechibidoro na obodo gị, ya mere, ọ dị mfe ịbanye na ntanetịime.